रीता लम्साल - कान्तिपुर समाचार
भूकम्पबाट कसरी जोगिने ? अधिक क्षति हुन नदिन के गर्ने ? पूर्व योजनाको तयारी आवश्यक हुन्छ । भूकम्पपछि पीडितका लागि आपत्कालीन व्यवस्था, अस्थायी आवास निर्माण, क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
भूकम्पका कारण भएको भौतिक क्षति पुनर्निर्माण संस्थागत रूपमा गर्न पाँच वर्षका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि आधाभन्दा बढी गइसकेको छ । आवेदन दिएर लाभग्राहीमा पर्ने–नपर्ने अन्योलमा बसिरहेका थुप्रै छन् ।
संविधानको मर्मअनुरूप संघीय शासनलाई मूर्तरूप दिन स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ तर यसप्रति राज्यको ध्यान जान सकेको छैन  । राज्यको शासनप्रणली संघीय स्वरूपमा जानुपूर्व तयारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकिएको छैन  ।
रीता लम्सालका लेखहरु :